Tafahaona volana Aogositra 2018 « Mitsangàna hanohitra ny herisetra »
Mana isan'andro 23/09/2018
Mbola miantso anao hiverina Aminy Andriamanitra anio, ekeo izany ary misaora Azy.tohiny
Perikopa septambra 2018
Azonao Jerena eto ny video
Alahady 16 Septambra 2018
Toriteny feo mivantana
Akon'ny fetin'ny Ray 2018 - 18 juin 2018
Tsianjery, hira, teny mamy, firariantsoa maro samihafa ary fanomezana no nanamarihina ny fetin'ny Ray teto amin'ny fitandremana Ankadifotsy. tohiny
Pentekosta 2018 an-tsary 24 mai 2018
Marobe ireo mpino kristianina no tonga nidera sy nakalaza an'Andriamanitra ny alahady 20 May 2018 Pentekosta teo. Nisy ireo natao batisa tamin’izany48 mianadahy ireo nanolo-tena ho mpiray latabatra amin'i Jesoa Kristy TompoIreo Mpiray latabatra a... tohiny
Velona mba hanao inona ianao? 09 mai 2018
Famelabelarankevitra nokarakarain'ny Komitin'ny Farimbona izay namoaboasan'ny raiamandreny Mpitandrina ny lohahevitra hoe: velona mba hanao inona ianao ny Alahady fahadimy tamin'ny Aprily 2008 lasa teo. tohiny
SP19, manaiky mihavao sady havaozin’ ny Fanahy Masina 09 mai 2018
Fihaonambe voalohany 2018 SPIA natao tany Sadabe ny 4-5 Mey lasa teo. tohiny
KOMITIN' NY FARIMBONA
"Fetin'ny taona nahavelomana" - FJKM Ankadifotsy ny 29 Aprily 2018 @ 3 ora.
Ny Sakramentan'ny fanasan'ny Tompo
Lesona Katekomena Asabotsy 09 Desambra 2017 - Ny Sakramentan'ny fanasan'ny Tompo
Ireo sakramenta roa ireo no raisin’ne FJKM ho «FANORENANY ny Finoany an’i Jesoa Kristy», ilay Tompo sy Andriamaniny. Ireo no MAMPIRAY azy amin’ny Fiangonana Protestanta zanaky ny REFORME manerana...
AFF- fiofanana tafika Masina
Efa mitohy ny fiofanan'ny AFF eny amin'ny IFR (fiofanana Tafika Masina) tarihin'ny Raiamandreny Mpitandrina Ranjakavola. Isaky ny Sabotsy aorian'ny fianarana Katekomena amin'ny 4 ora etsy amin'ny I...
5 mn Alahady 18 Martsa 2018
"Koa samy hotsaraiko araka ny ataonareo avy hianareo, ry taranak' Israely, hoy Jehovah Tompo. Mitodiha, ka mibebaha amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafintohinana mahameloka an...
Hetsika vide grenier-Tolo-tànana ho fampandrosoana
Fiangonana FJKM: ALAHADY 21 JANOARY 2018 eny Mahamasina avokoa.
Fanompoam-pivavahana ho fitondrana am-bavaka ny filohan’ny FJKM mianakavy, ny FJKM sy ny taom-piasana vaovao.
Ny Alahady 21 Mey 2017 lasa teo no nanokanana ireo nahavita ny fianarany tamin'ny SEFALA tany amin'ny FJKM telotrano tany Canada.